White Topaz - Nkọwa gemological kwesịrị ekwesị bụ topaz na-enweghị atụ - Video
Tags enweghị ntụpọ, Topaz, acha ọcha
Topaz topa bụ ụdị dị iche iche nke Topaz. A na-akpọ ya "ọcha" n'amaghị ama. Otú ọ dị, aha gemological kwesịrị ekwesị bụ topaz na-enweghị atụ
Otu ịnweta silicate nke aluminom na fluorine
Topaz bụ mineral silicate nke aluminum na fluorine. Na usoro ọgwụ nke Al2SiO4 (F, OH) 2. Topaz na-egosipụta na usoro orthorhombic. Na kristal ya na-abụkarị prismatic. Nke pyramidal na ndị ọzọ na-ejedebe. Ọ bụ ihe na-esi ike ịnweta, ntụgharị uche nke Mohs 8. Ọ bụ ihe kachasị sie ike ịnweta ịnweta silicate. Ihe ike a na nghọta ya na agba ya dị iche iche na-egosi na ọ nwetawo ihe dị ukwuu na jewelery. Nakwa dị ka nkume na-egbutu. Na nke intaglios. Na nkume ndị ọzọ dị egwu.
Egwu na topaz na-adịghị ahụkebe, nke a na-adịghị ahụ ọkụ, nke a na-akpọghị, site na Takeo, Cambodia
Topaz na ala ya bụ Cololess. A njirimara nke pụtara na ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbagwoju anya na quartz. Ọtụtụ adịghị ọcha na ọgwụgwọ nwere ike ime ka ọ bụrụ mmanya na-acha uhie uhie, isi awọ, ọbara ọbara-acha ọbara ọbara, acha odo odo, ma ọ bụ pink. Na opaque ka translucent ma ọ bụ uzo. Mkpụrụ pink na uhie dị iche iche na-esi chromium dochie aluminom n'ebube ya.
Ọ bụ ezie na ọ siri ike, a ghaghị ilekọta ya karịa nlekọta ndị ọzọ na-enwe nrụgide yiri nke a. N'ihi adịghị ike nke nrịkota atọka nke mkpụrụ osisi nke nkume na otu ma ọ bụ ọzọ axial ụgbọelu. Dịka ọmụmaatụ, ngwongwo chemical nke diamond bụ carbon. Na-ejikọta onwe gị na ibe ya na ike zuru oke na ụgbọ elu ya nile. Nke a na-enye ya ọchịchọ nke ịkpụkpụ aka. Ụdị ụgbọelu a ma ọ bụrụ na ị nwere ike zuru ezu.
Topaz nwere ndepụta dị mkpirikpi dị nro maka ntụgharị. Ya mere, nkume ndị nwere akụkụ ma ọ bụ tebụl buru ibu anaghị egbuke egbuke dịka nkume ndị a na-esi na mineral na-atụgharị. Ọ bụ ezie na topaz na-enweghị atụ na-egbukepụ egbuke ma na-egosi "ndụ" karịa ibelata quartz. Mgbe a na-ebipụ ya "ọpụpụ", ọ nwere ike gosi na ọ bụ okpokoro okpokoro na-egbuke egbuke. Gburugburu ebe ndị nwụrụ anwụ na-ele ya anya. Ma ọ bụ mgbanaka nke okpueze na-egbu maramara. Site na table dị mma.
A na-ejikọta Topaz na nkume dị egwu. Na granite na ụdị rhyolite. Ọ na-eju anya na pegmatite granitic. Ma ọ bụ na cavities na rhyolite n'onwe. Anyị pụkwara ịchọta ya na fluidite na cassiterite na mpaghara dị iche iche.
zụta topaz na-acha ọcha na ụlọ ahịa anyị
Tags London-acha anụnụ anụnụ, Sky blu, Switzerland-acha anụnụ anụnụ, Topaz